Pu polyurethane mkpuchi ụfụfụ injection igwe zigara Peru - BOBO Machine Co., Ltd.
Pu polyurethane mkpuchi ụfụfụ injection igwe zigara Peru
Elu ma ọ bụ ala nsogbu Polyurethane ụfụfụ injection igwe
The elu nsogbu polyurethane ụfụfụ injection igwe n'ihi na ire na-pụrụ iche e mere maka nchekwa ụfụfụ, ohiri isi, akpụkpọ ụkwụ, naanị , ọgba tum tum ala oche injection ọrụ na na. Ọ a na-etinyere na ụfụfụ mbukota , karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na pricise, na-emebi emebi, oké ọnụ ibu packaging.This igwe na-achịkwa PLC, elu kpomkwem, mfe ime ihe, adaba mmezi. Mgbe tupu-ka mbụ ọgwụ na-okokụre, egwu agba anọ ga-enye Mkpu.
Elu nsogbu Pu injection igwe
Ihe e ji mara nke elu nsogbu na-asụ ụfụfụ igwe n'ihi na ire-ezi Ịgwakọta mmetụta, dịghị fọduru, dịghị ihicha gị n'ụlọnga, elu n'ichepụta na-eri, elu oriri ike, elu nsogbu ọgwụ, elu ụfụfụ Ime Otu.
Low mgbali Pu injection igwe
Ihe e ji mara nke ala nsogbu na-asụ ụfụfụ igwe n'ihi na ire bụ ala n'ichepụta na-eri, mfe Ọdịdị, adaba mmezi na ala oriri ike.
zuru ezu Spec
Ọgwụ na agbanwe agbanwe oge ikike
Chaa ike / static Ịgwakọta
Abịakọrọ ikuku ọkọnọ
akọrọ, dịghị-na mmanụ Pressure:0.6-0.8MPa
6KW x 2, Automatic akara
Two-bred kpo oku tank, plus mkpuchi, kpo oku ngwa ngwa, ala oriri ike.
Ihe onwunwe nke tank: SS304
Size nke nri Flange: φ150
Ịgwakọta isi jiri mere ese n'elu mmiri n'ibu akàrà, na na ya elu shiee Ịgwakọta ịghasa isi, nke nwere ike mix abụọ ihe na mma arụmọrụ.
nri Flange: φ110
The tinyekwa bụ na ala n'akụkụ.
Elu nsogbu Pu polyurethane igwe nwere ike etinyere ụfụfụ mbukota , karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na pricise, na-emebi emebi, oké ọnụ ibu nkwakọ.
The elu nsogbu polyurethane ụfụfụ injection igwe n'ihi na ire na-pụrụ iche e mere maka nchekwa ụfụfụ, ohiri isi, akpụkpọ ụkwụ, naanị na ọgba tum tum ala oche injection ọrụ. Nke a igwe na-achịkwa PLC, elu kpomkwem, mfe ime ihe, adaba mmezi. Mgbe tupu-ka mbụ ọgwụ na-okokụre, egwu agba anọ ga-enye Mkpu.
The nkịtị ngwugwu bụ osisi igbe(size: L * W * H). If export to european countries,the wooden box will be fumigated.If container is too tigher, Error 404 (Not Found)!!1
Previous : Automatic haịdrọlik ígwè anwụrụ mkpanaka eri Rolling ma kpọchie eme igwe zigara Norway
Osote : Gburugburu mgbanwe aluminum duct Ndinam igwe zigara Thailand